29 / 04 / 2019 29 / 04 / 2019 ဂရေဟမ် 2518 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု, 75947 Hagrid's တဲ: Buckbeak ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေး, 75947 Hagrid ရဲ့တဲ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည်လာမည့်ပုံများကိုထပ်မံပေးအပ်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ။
အသစ်ကလေးထုတ်ဖေါ်မကြာသေးမီကအောက်ပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ, အ Lego Group မှပုံများကိုမျှဝေထားသည် ထုတ်ကုန်အသစ်များ အတွင်းပါရှိသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုဖော်ပြသောဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ။ 75957 အဆိုပါ Knight ဟာဘတ်စ်ကား နှင့် 75964 ထွန်းပြက္ခဒိန် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ အသစ်အစုံ ယူကေတွင်ဇွန်လ ၁ ရက်နှင့်ယူအက်စ်တွင်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
75945 Expecto နာယက
121 အပိုင်းပိုင်း, $ 19.99, £ 19.99
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိသတ်များ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီ7နဲ့ XNUMX အသက်နှင့်အထက်မှော်ဆရာ, Dementors နှင့်ဒဏ္icalာရီသတ္တဝါများ၏မှော်ကမ္ဘာသို့ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75945 Expecto နာယက အဆောက်အ ဦး set ။ Great Lake သည်တားမြစ်ထားသောသစ်တောမြင်ကွင်းတွင်ကလေးများသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုချစ်မြတ်နိုးမည်၊ Exemento Patronum ကို ၂ Dementor minifigures တွင်ပစ်ခတ်ပြီးသူ၏ခေါင်းကိုင်ဖြစ်သော Sirius Black ကိုဟန့်တားရန်သြဂုတ်လ -၂၀၁၉ အတွက်အသစ်သောဟရီရီ၏နာယကအဖြစ်အပျက်ကိုဆင့်ခေါ်သည်။ ။ ဒီအနီရောင်လေးခုနှင့်အဆုံးမဲ့မှော်ဖြစ်နိုင်ခြေများရှိသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ Lego အစုသည်စိတ်ကူးယဉ်ကစားနည်းတစ်ခု၏မှော်ဆန်သောကမ္ဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု
265 အပိုင်းပိုင်း, $ 29.99, £ 29.99
သင့်ရဲ့ငယ်ရွယ်ပေးပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ ပန်ကာကမ္ဘာတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနဂါးတစ်ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ The Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု မှော်စွန့်စားခန်းများနှင့်ပြည့်နေသောကလေးများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၈ နှစ်နှင့်အထက်မည်သူမဆိုဟယ်ရီသည်ထူးဆန်းသောရွှေကြက်ဥကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားနေစဉ်အခြားမှော်စာသင်ကျောင်းများမှပြိုင်ဘက်ကျောင်းသားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကူညီခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အနိုင်ယူဖို့ဟန်ဂေရီ Horntail နဂါးရှိပါတယ်! ၎င်း၏ရွေ့လျားခြေလက်များနှင့်အတောင်ပံနှင့်အတူ, ဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအရာကိုကျော်လွန်ရန်လျင်မြန်စွာ wizardry ယူပါလိမ့်မယ်။ 8 minifigures ပါဝင်သည်နှင့်အတူ, ဒီ ဟယ်ရီပေါ်တာ Lego နဂါးအစုလိုက်အဆုံးမဲ့စိတ်ကူးယဉ် Adventures ကိုနှိုးဆွလိမ့်မယ်
496 အပိုင်းပိုင်း, $ 59.99, £ 49.99
ငယ်ရွယ်သောစုန်းမနှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်များသည်မှော်မြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်အတူ Azkaban ၏အကျဉ်းသား Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75947 Hagrid's တဲ: Buckbeak ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေး playset ။ ကလေးတွေအတွက်ဒီအေးမြကစားစရာပေးသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ အသက် ၈ နှစ်နှင့်အထက်ရှိပရိသတ်များသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောသရုပ်ဖော်ခြင်းအတွက်အဆုံးမဲ့အခွင့်အရေးများရရှိသည်။ သူတို့က Hagrid တဲ၏အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်၊ မှော် ၀ န်ကြီးနှင့် Executioner ၀ န်ကြီးတို့ရောက်လာသည့်အခါ Hagrid ၏ဖရုံသီးအဖုံးနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေပြီး၊ အဆိုပါမှော် Adventures ဒီနှင့်အတူအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ Lego အစုံ အနိမ့် ၆ ခုပါ ၀ င်ပြီးရွေ့လျားနိုင်သောအတောင်ပံများ၊ ခေါင်းများပါ ၀ င်သည့်တည်ဆောက်နိုင်သော Buckbeak ပုံနှင့်မီးဖိုအတွက်ခလုတ်သုံးအလင်းရောင်အုတ်အပါအဝင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
922 အပိုင်းပိုင်း, $ 89.99, £ 84.99
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိသတ်များ ဟယ်ရီပေါ်တာ အသက်9နှစ်နှင့်အတွင်းအတွင်းရှိမှော်ကမ္ဘာသို့ Lego® ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင် အစုံ မှ 8 အသေးစားနှင့်အထင်ကရနေရာများနှင့်အတူ ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Azkaban ၏အကျဉ်းသားနှင့် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Goblet of Fire ကလေးများသည်စိတ်ကူးယဉ်ကစားနည်းတစ်ခုတွင်နှစ်မြှုပ်မည်။ Dumbledore ၏ရုံးခန်းသို့သွားရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမှားများမှကာကွယ်ခြင်းသို့တက်ရောက်ခြင်းရှိမရှိ Artသင်ခန်းစာ၊ မျှော်စင်နာရီကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း (သို့) Yule Ball တွင်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် 'dance' function ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်း။ ဟော့arts နာရီမျှော်စင်သူတို့ဘယ်တော့မှထွက်မသွားပါဘူး
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၅၉၅၇ နိုက်ဘတ်စ်ကားကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ကြီးမားသောအုတ်အား LEGO ကျောင်းဝင်းသစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည် →